Herinandro Masina Talata : Tena irery – Tsodrano
Mampalahelo ny fihetsiky Jodasy. Tsy nazava taminy ny maha Zanak’Andriamanitra an’i Jesosy, izay niaraka taminy isan’andro. Matoa izy sahy nanolotra Azy tamin’ny fariseo sy ny mpanora-dalana ary nifanaraka tamin’izany dia Jesosy olona manana fiteny mahavariana, nanao asa, betsaka mpanaraka… no fantany. Izany rehetra izany dia toa nampanahy avokoa. Tsy anjarako ny mitsara an’i Jodasy fa saingy noho ny tsi-finoany no nahatonga izao. Izany tsy finoana izany dia nitondra fisarahana ary mitondra ho amin’ny fahafatesana . Eto dia ny fanahafatesan’i Jesosy ara-nofo atsy ho atsy. Vita hatreo ny fiarahan’i Jesosy sy Jodasy. Manomboka hatreo ny fisarahana.
Tsy dia ho tahak’izany foana ny fiainana fa mba misy zavatra tsara ihany. Misy ireo izay ao anatin’ny fahoriana samy hafa dia manana olona mampahery, na manambitamby mba hahazoana mitraka. Misy izay tsy mba nandia izany. Fa ny an’i Jesosy dia tapitr’ohatra ny maha irery Azy satria rehefa tonga ny tena mangidy dia na Andriamanitra aza tsy namaly Azy intsony. Dinihina amin’ny fotoana hafa ny amin’izany.